Ihe nlere a nwere arụmọrụ eSports niile a na-atụ anya ya, nke na-etu ọnụ oge nzaghachi 1ms na AMD FreeSync nke na-ewepụ nsị na ịkwa akwa, mana ugbu a na HDR. Ihe ngosi ohuru di elu di elu (HDR) na - eme ka egwuregwu gi di nma site na iji oji na oji mee ka o doo anya na ihe omuma gi nke mbu. Echefula onye iro gị ịmịkọrọ na ndò ọzọ. Nkwado nkwụnye na kpọọ na-abịa na esịtidem nkwụnye ..
CCTV nyochaa PM220WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 21.5 ”agba ileba anya na-enye HDMI na VGA ntinye. IPS panel, na-anya isi 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
A na-akwado ihe ngosi FHD n'ụzọ na-agba ume site na ngwa ngwa ngwa ngwa 180hz na-atọ ụtọ iji hụ na usoro na-agagharị ngwa ngwa na-apụta nke ọma na nkọwa zuru ezu, na-enye gị mgbakwunye ahụ mgbe egwu egwuregwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 27 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, BNC & 4in1 ntinye. Site na ntinye BNC na ntinye 4in1, ntụgharị ya ga-enye ya ohere ịrụ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
CCTV nyochaa PX240WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 23.8 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, BNC & 4in1 ntinye. Site na ntinye BNC na ntinye 4in1, ntụgharị ya ga-enye ya ohere ịrụ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
CCTV nyochaa PX220WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 21.5 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, BNC & 4in1 ntinye. Site na ntinye BNC na ntinye 4in1, ntụgharị ya ga-enye ya ohere ịrụ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 55 ”4K agba ileba anya na-enye DisplayPort, HDMI, VGA, Looping BNC, Audio In. Ihe nlele a na-enye oke mkpebi dị elu na agba ziri ezi, nha zuru oke iji rụọ ọrụ na ebe ọ bụla. The metal bezel bụ a ọkachamara imecha na-enye anwụ ngwa ngwa na ntụkwasị obi n'elu ndụ nke unit.
CCTV nyochaa PA270WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 23.8 ”agba ileba anya na-enye HDMI na ntinye VGA. IPS panel, na-anya isi 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.